အမဲသားလူရှုပ်ခြောက်စက် - Twesix
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ အမဲသားလူရှုပ်ခြောက်စက်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Twesix.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Twesix.
Tsix အသားလေယာဉ်ခြောက်စက်သည်အမဲသား, ဝက်သား, ကြက်သားနှင့်အသားများစွာကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောအသားသည်အပူချိန်ကိုပထမကာလတွင်အသုံးမပြုပါ။ အသားခြောက်စက်တွင်ခြောက်သွေ့ပြီး dehumdifying နှင့်နောက်ဆုံးကာလ၌ 60degree အပူချိန်ကပိုကောင်းတယ်။ ပူပြင်းသည့်လေကိုခြောက်သွေ့သောလေမှုတ်စက်သည်စားနပ်ရိက္ခာစက်ရုံအားခွေးများအတွက်အမဲသားသို့မဟုတ်ကြက်သားများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။
dehgrate moringa မှ Herbing Machine DPHG050s-G Tsix မှထွက်ခွာမည်
Moringa အရွက်များသည်အိန္ဒိယနှင့်အာဖရိကတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ Tsix Moringa ခြောက်သွေ့စက်သည်အရွက်များကိုအနိမ့်ဆုံးနှင့်အလယ်အပူချိန်တွင်ခြောက်သွေ့စေပြီးအရောင်နှင့်အာဟာရကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲအရွက်များကိုရေခန်းခြောက်ရန်သင့်တော်သောအပူချိန်တွင်ခြောက်သွေ့စေသည်။ Moringa Leaves Cab ၏ရနံ့ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအာဖရိကမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှ0န်ဆောင်မှုခံယူသူအများစုသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို0ယ်ယူခဲ့သည်။
Foshan ရှိ Tsix အစားအစာခြောက်သွေ့စက်သစ်စက်ရုံ
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူယခင်စက်ရုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ဖေဖော်ဝါရီလ 19 ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စတုရန်းပေ 10000 ရှိသောစက်ရုံသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာပြီးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။ Pool Hepary Pump နှင့်အပူရှိပူအပူစုပ်စက်နှင့်အပူစုပ်စက်များနှင့်အပူစုပ်စက်များနှင့်အပူစုပ်စက်များနှင့်အပူစုပ်စက်များနှင့်အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်ကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ဖောက်သည်များလည်ပတ်ရန်0န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကြိုဆိုသည်။
Twesix ခွေးအတွက်ခွေးများအတွက်ခွေးများကိုကုသရန် --dphg150s-g
သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အလိုအလျောက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာခြောက်စက်သည် Twsix PET အစားအစာခြောက်သွေ့စက်ကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အတွက်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။သန့်ရှင်းခြင်း - စွမ်းအင်ကိုအသုံးမပြုသောဖော်ရွေခြောက်သွေ့သောစနစ်။ Twsix Pet Food Drier သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာခြောက်သွေ့မှုကိုခြောက်သွေ့စေရန်ပြီးပြည့်စုံသောစက်ဖြစ်သည်။ ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအခြောက်ခံစက်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာခြောက်သွေ့သောအစားအစာခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုယန္တရားကို သုံး. လတ်ဆတ်စွာထားရှိလိမ့်မည်။အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်, သန့်ရှင်းလွယ်ကူစေရန်လွယ်ကူပြီးအထိခိုက်မခံသောအစာအိမ်နှင့်အတူအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အသုံးဝင်သည်။ မူရင်းဒီဇိုင်း, တစ်ဖက်သတ်တံခါးကို။ Twsix အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာခြောက်စက်နှင့်အတူသင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာကိုမီးဖိုသို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ကပ်စရာမလိုဘဲခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ Twsix PET အစားအစာခြောက်စက်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာခြောက်သွေ့စေရန်ကြာရှည်ခံ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
100 ကီလိုဂရမ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအသေးစားအပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်ကို Ahrz015-x
အပူစုပ်စက်အပူပိုင်းစက်သည် 100 ကီလိုဂရမ်လတ်ဆတ်သောအစားအစာကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Hotel, Farm, အိမ်နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအပူရှိန်အပူ, အအေး, ခြောက်သွေ့ခြင်း, ခြောက်သွေ့ခြင်း, ခြောက်သွေ့ခြင်း, လျှပ်စစ်အပူပေးစက်အခြောက်သားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်စွမ်းအင်များစွာကိုသက်သာစေသည်။ အစားအစာ dehydrator သည် dehumdroding system, dehumiddied system နှင့် dehiiddied fan နှင့် dehiiddiiding fan နှင့် dehiiddiiding အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ ဒါကြောင့်စက်ကခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် dehumidifying အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်စု - အခြောက်ခံစက်ကို 100% သံမဏိကိုယ်ထည်ခန္ဓာကိုယ်, သံမဏိဂရမ်မီများ, သံမဏိဂရမ်မီများအပါအ0င်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အပိုခံနိုင်ရည်အတွက်သံမဏိဂရမ်များ, ဤထုတ်ကုန်သည်အရွယ်အစား, စွမ်းအင်ထိရောက်မှု, အိမ်သုံးအစားအစာခြောက်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ပါ။Myanmarsfundional: သင်သွေ့ခြောက်စေချင်တယ်။ ၎င်းသည်စမတ်ကျပြီးဘက်ပေါင်းစုံသောအစားအစာခြောက်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစာခန်းခြောက်ရုံသာမကအပူပေးစက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Twsix ၏သေးငယ်သောအပူစုပ်စက်သေးသေးလေးအခြောက်ခံစက်သည်နေရာအကန့်အသတ်ရှိသောအိမ်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အသားများ, ငါးနှင့်အခြားအစားအစာများထိန်းချုပ်ခြင်း, အလိုအလျောက်မှတ်တိုင်ထိန်းချုပ်ခြင်း, လက်တွေ့ကျသောအိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများခြောက်သွေ့သောအစားအစာများ, အသားများ, Twsix အသေးစားအပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်သည်အစာကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာခြောက်သွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအိမ်ထောင်စုပေါင်းစုံအိမ်သုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အခြောက်ခံစက်သည်အချိန်တိုအတွင်းအစာခန်းခြောက်သောအားကောင်းသောပန်ကာပါ0င်ပြီးလျှပ်စစ်အခြောက်ခံစက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Tsix 300kg ပင်လယ် buckthorn berry ခြောက်သွေ့သောစက် -dphg030s-g